Malagasy | Радоје Домановић
Tamin’ny taona 1895, dia nanao ny fihaonana voalohany mba ho lasa mpampianatra tao Pirot, atsimon’ny Serbia, faritra izay vao nafahana tamin’ny fanjakana otomàna vao haingana. Tao Pirot dia nifankahalala tamin’i Jaša Prodanović (1867-1948), mpampianatra sy mafana fo iray izy izay nanampy azy hanefy ny heviny ara-politika. Tao koa no nifankahafantarany tamin’ny vadiny, Natalija Raketić (1875–1939), mpampianatra tao Sremski Karlovci, izy no nanohana azy tamin’ireo sedra nolalovany tamin’ny fiainany. Nanan-janaka telo izy ireo.
Nony niditra tao amin’ny antoko mpanohitra People’s Radical Party izy, dia nifandahatra tamin’ny fitondran’i Obrenović, ary nafindra tany Vranje izy tamin’ny faran’ny taona 1895. Tamin’ny taona 1896 dia nafindra tany Leskovac indray izy. Tamin’i Domanović mbola mpampiantra dia efa nanomboka nanoratra. namoaka ny sombin-tantarany voalohany izy tamin’ny taona 1895. Taorian’ny fisehoana voalohany fanoherana ny fitondrana nataony ny taona 1898, dia samy natsahatra tamin’ny asam-panjakana izy sy ny vadiny. I Domanović kosa dia nifindra monina nankany Belgrade niaraka tamin’ny fianakaviany.
Ny tetikasa “Radoje Domanović” dia tantanan’i Vladimir Živanović, injeniera kalitao sy mafana fo tamin’ny literatiora, nnnaniry ny hamadiana ireo asa soratr’i Radoje Domanović rehetra ho hita anaty solosaina. Ary ny asa sy ny dikateny rehetra nataony dia azo ovaina na alaina. Ireto tantara manaraka ireto no nadika manokana ho an’ity tetikasa ity, ary sambany navoaka teto:
Mpitarika (1–2–3), 1901
Ho an’ny tetikasa “Radoje Domanovic” nadikan’i Domoina Radaniela Andrianoro.